သူကြီးမင်း (တုံးဖလား): ဒုတိယပျိုးခင်း
အမုန်းမပွါးပါ၊ အပြုံးများစွာ၊ တုံးဖလားရွာ
မရမ်းချောင်းမှာ စိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့ မြန်မာမုဒိတာလူငယ်များအဖွဲ့ရဲ့ မုဒိတာဖြစ်စရာစိုက်ပျိုးခင်းတွေကို မုဒိတာမျက်စိနဲ့ တွေ့မြင်ရဖို့ မုဒိတာပွါးပြီး မြန်မာမုဒိတာလူငယ်များအဖွဲ့ဘလော့ဂ်မှ တင်ပြီးသမျှ တစ်ဆင့် ကူးယူဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ။
မရမ်းချောင်းဂေဟာအတွက်အလှုလေး လုပ်ကြမယ်လို့ စပြီးတိုင်ပင်တဲ့အချိန်က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရရှိလာနိုင်တဲ့ အလှုငွေကို ခန့်မှန်းခဲ့ကြရာမှာ ၇သိန်းဝန်းကျင်လောက်ပဲ ဖြစ်ဖို့များတယ်ဆိုပြီး ကျွန်တော်တို့ ကောက်ချက်ချခဲ့ ကြတယ်။အဲ့တာလေးနဲ့ ဆန်အိတ် လေး ငါးအိတ်လောက်ရယ်၊ ၀ှီးချဲလ်လေး နှစ်စီးလောက်ရယ်နဲ့ ပိုတာလေးကို ပဒေသာပင်ထဲထည့်မယ်ဆိုပြီး ဒီအလှုလေးကို အုတ်မြစ်စချတယ်။တကယ်လည်း အလှုခံလို့ပြီးရော ကျွန်တော်တို့ လက်ခံရရှိခဲ့တဲ့ပမာဏက ကနဦး ကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းထားခဲ့တာထက် ခြောက်ဆကျော်လောက် ရရှိခဲ့တယ်။ မရမ်းချောင်းက ဝေဒနာ-ရှင်တွေရဲ့ ကံတရားကောင်းမှုကြောင့်ရယ် နိုင်ငံအရပ်ရပ်က အလှုရှင်တွေရဲ့ တိုင်းတာမရနိုင်တဲ့ သဒ္ဓါတရားတွေကြောင့် ကျွန်တော်တို့ဟာ ဒီအလှုငွေတွေနဲ့ မရမ်းချောင်းဂေဟာရဲ့ လက်ရှိလိုအပ်နေတဲ့ အရာလေးတွေ (ဂေဟာက တောင်းဆိုလာသလောက်အကုန်)ကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ခဲ့ တဲ့အပြင် ပိုလျှံနေတဲ့ အလှုငွေတွေကိုပါ ရာသက်ပန် ပဒေသာပင်ထဲ ထည့်ပေးနိုင်ခဲ့ပါပြီ။စိတ်ကြည်နူးမိတယ်၊ ပီတိဖြစ်မိတယ်ဆိုတာထက် အဆပေါင်းများစွာ ရင်ထဲမှာဖြစ်နေတာကို စာစီပြလို့ မရနိုင်ပါဘူး။မနက်ကလည်း အစောကြီး အလုပ်ထဲကထွက်ပြီး ဒီနေ့မှာ သွားပြီးလှုပေးမဲ့ အဖွဲ့တွေကို မေတ္တာပို့ပြီး ဖုံးဆက်တယ်။သူတို့ တက်ကြွနေတဲ့ အသံတွေကို ကြားမိတော့ ကြက်သီးတွေတောင် ထမိတယ်။
ဒီနေ့မှာ ကိုကျော်စွာစိုးမြတ်နဲ့သမီးစံတို့ ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဟာ ဆေးဝါးများ၊ ခေါင်းအုံးအလုံး(၈၀)၊ ၀ှီးချဲလ် (၁၀)စီး၊ ဆန်(၂၀)အိတ်၊ ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ ၂၅သိန်းကျော်ဖိုး အလှုပစ္စည်းများအား တင်ဆောင်ကာ ရန်ကုန်မှ နံနက် ခုနစ်နာရီခွဲအချိန်မှာ MMYG လူငယ်အင်အားစု (၃၀) ၀န်းကျင်နဲ့ ထွက်ခွာကြပါတယ်။နေ့လည်စာ ဒံပေါက်ကြွေးမှာ ဖြစ်တာမို့ မရမ်းချောင်းဂေဟာကို မနက် ဆယ်နာရီရောက်အောင် သွားခဲ့ကြပါ တယ်။
ကျော်စွာနဲ့ မိစံတို့ ဦးဆောင်တဲ့ MMYG အင်အားစု မရမ်းချောင်းဂေဟာကို ရောက်သွားကြပါပြီ..။
ခရီးရောက်မဆိုက်ပဲ ခဏနားပြီး သူတို့တွေ အလှုပစ္စည်းတွေ ကားပေါ်က ချကြပြီ။
သူတို့တွေ တကယ် ပင်ပန်းကြပြီ..
ဂေဟာမှ သန်စွမ်းတဲ့လူတစ်ချို့ လည်း ကူညီပေးကြပါတယ်..။
တစ်ဖက်က ပစ္စည်းတွေ ချနေတဲ့အချိန်မှာ ကျန်တဲ့တစ်ဖွဲ့က ဂေဟာက ဝေဒနာရှင်တွေအတွက် နေ့လည်စာ ပြင်ဆင်ကြပါတယ်။
ဒံပေါက်စားပွဲဝိုင်းကို လာရောက်နိုင်တဲ့ ဝေဒနာရှင်တွေ အလှုဒံပေါက်ကို စားဖို့ အဆင်သင့် ပြင်ဆင်ပြီးပါပြီ..
သူတို့တွေ အလှုထမင်းကို စားကာနီးအချိန်မှာ လက်အုပ်ချီနေကြတဲ့ပုံက ကျွန်တော့ရင်ကို မြှားတစ်စင်းနဲ့ ထုတ်ချင်းပေါက်အပစ်ခံလိုက်ရသလို ထိခိုက်ခံစားရစေတယ်။ကျွန်တော်တို့ အလှုအတွက် အထူးတလည် ဆုတောင်းပေးစရာ မလိုပါဘူး..။အထူးသဖြင့် လက်အုပ်ချီစရာ မလိုပါဘူး ခင်ဗျား..။
အနာရောဂါတွေ မြန်မြန်သက်သာပါစေဗျာ..၀ဋ်ကြွေးတွေဆိုလည်း ခဏတာပဲ ဖြစ်ပါစေ..။
လူကြီးတွေပြီးတော့ ကလေးတွေကို ကျွေးပါတယ်။ မရမ်းချောင်းကျေးရွာက ကလေးတွေ ဂေဟာမှာလာပြီး ဆော့ကစားနေကြဟန်တူရဲ့။
တကယ်တော့ ဒံပေါက်ထမင်းဆိုတာ မရမ်းချောင်းဂေဟာက ဝေဒနာသည်တွေ တစ်နှစ်လုံးနေမှ နှစ်ကြိမ်ပဲ စားခဲ့ဘူးပါတယ်တဲ့။အခုတော့ ကျွန်တော်တို့ MMYG က သူတို့အတွက် သုံးကြိမ်မြောက် ဒံပေါက်ထမင်းကို လှုဒါန်းနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒီနေ့မှာ ဒီအလှု ဒီခရီးအတွက် ဒံပေါက်အလှုကို အမေရိကန်နိုင်ငံမှ ကိုဝေမိုးအောင်+မခင်မာဇင်တို့က သားဖြစ်သူ မောင်ကျော်ဇင်ဟိန်းရဲ့ မွေးနေ့အလှုအဖြစ် လှုဒါန်းပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်မှ Feel Resturant Group မှ မေတ္တာဖြင့် အကောင်းဆုံး ချက်ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ကိုဝေမိုးအောင် + မခင်မာဇင် နဲ့ သားဖြစ်သူ မောင်ကျော်ဇင်ဟိန်းတို့ ဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်တွေ့ပြီး စိတ်နှလုံး ချမ်းမြေ့ကြပါစေ..မုဒိတာ ပွားနိုင်ကြပါစေ..
တကယ်တော့ ကျွန်တော် ဒီနေ့ညမှာ အကုန်လုံးကို တင်ပေးဖို့ပါပဲခင်ဗျား..။ဒါပေမဲ့ မီဂါဝပ်တွေ ပိုလျှံနေပါတယ်ဆိုတဲ့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံက ရွှေမြို့တော်ကြီးမှာ မီးပျက်နေတဲ့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံက ၀ိုင်းတော်သားတွေ ဓါတ်ပုံပို့ပေးဖို့ အခက်တွေ့နေကြလို့ပါခင်ဗျား..။ နောက်လာမဲ့ အပိုင်းမှာ ၀ှီးချဲအလှုရှင်များနဲ့ ပဒေသာပင်အတွက် ထည့်ဝင်ငွေအလှုဓါတ်ပုံများ၊ ဗွီဒီယိုဖိုင်များကို ဖော်ပြပေးပြီး နောက်ဆုံးအပိုင်းမှာ အလှုစာရင်း ရှင်းတမ်းကို တစ်ပါတည်း ဖော်ပြပေးပါ့မယ်..
~~~~~~~~&&&&&~~~~~~~~ ဆက်ပါအုံးမည် ခင်ဗျား ~~~~~~~~&&&&&~~~~~~~~
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 21:51
သာဓု သာဓု သာဓုပါ ။ ထပ်ပြီးတော့ ရှဲပေးလို့ ကျေးဇူးပါ သဂျီး :)
Saturday,7April 2012 at 05:02:00 BST
အားရစရာ ကောင်းလိုက်တာ :D
Saturday,7April 2012 at 05:11:00 BST
သာဓု သာဓု သာဓု
Saturday,7April 2012 at 05:33:00 BST
Saturday,7April 2012 at 06:56:00 BST
ဗီဒီယို ဖိုင်ထဲမှာ သူတို့တစ်တွေဆုပေးလိုက်တဲ့အသံတွေက ရင်ထဲထိအောင်တောင်စီးမျောသွားတယ်ဗျာ။
Saturday,7April 2012 at 20:52:00 BST
Sunday, 15 April 2012 at 18:12:00 BST
Hey! I was curious to know if setting upawebsite such your own:
http://www.blogger.com/comment.g?blogID=7609397484304819032&postID=2984495685774365793 is hard to do
for inexperienced people? I've been wanting to develop my own blog forawhile now but have been turned off mainly because I've always assumed it required tons of work.
What do you think? Thanks alot :)
Feel free to surf to my site ... music
Wednesday, 15 May 2013 at 08:23:00 BST
Kyauk Kwin by buddhadayuk
လူတွေဟာ အသက်ရှင်သန်စဉ်ကာလမှာ အသုံးဝင်တဲ့အရာတစ်ခုခု လုပ်ထားခဲ့ရမယ်။ ဘာမှလုပ်မထားခဲ့ဘူးဆိုရင် အဲဒီလူဟာ လူမဟုတ်တော့ဘူး။ သတ္တ၀ါမည်ကာမတ္တပါဘဲ။
ရည်မှန်းချက်တစ်ခု ပြီးပြည့်စုံဖို့ လိုအင်ဆန္ဒတွေအားလုံးကို စတေးပစ်ရမယ်။
Usage of English (အင်္ဂလိပ်စာအသုံးအနှုန်း) (28)
အင်္ဂလိပ်စာ အင်္ဂလိပ်ကဗျာ (11)
ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်က ရောက်တတ်ရာရာ (115)
သူကြီးမင်းရဲ့ "တရားစခန်း" ပုံပြင်
ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်၊ ကျိတ်ပျော်ပါကွယ်၊ မိတ်ဖော်သဟာရယ်။ ------------------ (မှ)------------------ အပြုံးများစွာ၊ အမုန်းမပွါးပါ၊ တုံးဖလားရွာ။
ချက်ကြီးတို့ ခင်ဆုံတို့ တစ်သိုက်
Paccuppannakammavadin Buddhism - ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာ
konveksi tas promosi bergaransi di area Sinjai wa no. 0813 8631 3043
အမေရိကန်နိုင်ငံရေးတွင် ဝင်ရောက်ခြေရှုပ်ရန်ကြိုးပမ်းနေသည့် စွပ်စွဲ ချက်ဖြင့် ရုရှားလူမျိုးတစ်ဦးကို အမေရိကန် ဖမ်းဆီး
ရဲအုပ်ဝင်းနိုင် ကချင်၊ ကရင်ပြည်နယ်များတွင် ဧ၀ံဂေလိအကြောင်း၊ သက်သေခံခြင်း
Pressure Cooker Work Environment
SANITARI KONDUKTIVITI METER HE-960HI | JUAL CONDUCTIVITY METER | 081322599149
ဂျူးလိယက်၏ ဝတ္တုများ စုစည်းရာ
Kyaw Hnin Se Lwin
ကိုမောင်အေး ၏ ရသစာစုများ & MUSIC ဟေ့ ... မြန်မာဟာ မြန်မာပဲ။ မြန်မာဟာ မြန်မာပြည်မှာ နေရမယ်။
(65) AN ARTIFICIAL TREE BEING CARRIED ROUND BY A HAPPY CROWD IN CELEBRATION OF A CHARITY, DURING THE DAYS OF MYANMAR KINGS
Weird looking Shoes!
Hazel and her Rhythms
Maths & My Childhood life
Peace of Mind !
အမှတ်တမဲ့မှ အမှတ်တရ ရက်များ
ပန်းချယ်ရီတို့ ..ဝေရာမြေ ...
HAN LIN HTUN
အကြည့်အများဆုံးပို့စ် (၁၀) ခု
မျိုးဆက်သစ်များ၊ ဥာဏ်ရည်ထွားဖုို့ ကိုယ်အားစိတ်အား၊ ငွေကြေးအားဖြင့် ကြိုးစားတည်ဆောက်၊ စိတ်မနှောက်ဘဲ ပြီးမြှောက်ဖုို့သာ၊ တောင်းတရာသည် တု...
၀ါးထရံ ရက်ပြန်စုို့ မာန်ခဲ။ သစ်မရောက်ခင် ၀ါးတင်ထားဖုို့ရယ် အားပြည့်ဆင်နွှဲ။ (ဇွန် ၁၆ ၂၀၁၄)
ပွင့်လွှာထပ်ထပ် ပွင့်ဖတ်စုံစုံ ပွင့်ပုံဆန်းဆန်း ပွင့်လန်းညီညီ ပွင့်သီရွရွ ပွင့်လှစွင့်စွင့် ပွင့်ခွင့်ဖန်ဖန် ပွင့်နန်...
"ဗောဓိပင်ပျိုး ကဗျာ" ဂျစ်တူးမုံရွာ လျှိုးမှာထားလုို့ ပျိုးကာထားတဲ့ ဗောဓိပင်။ လှတောဆရာ သဒ္ဓါလှတော့ အသာရလုို့ ပြုံးပျော်ရွှင်။...
အတော်ကြီးကုို ၀ါနေတာပဲ။ ၀ါရင့်နေသူတွေ ၀ါနေကြတာ မဆန်းပေမဲ့ မ၀ါဘူးထင်နေတဲ့အရာတွေ ၀ါနေရင် ၀ါနေတာကုို ၀ါနေပါလားလုို့ သိသွားတဲ့အခါ ၀ါတူချင်း ...
အမုိုးရယ် ပြာ ခုန်မှာတော့ ယှဉ်ပူး။ အမြင်ကုို ဘ၀င်ဆက်တယ် လှချက်က ထူး။ (၁၀ ဇူလုိုင် ၂၀၁၄)
တံခါးခေါက်သံ ဆူဆူညံလည်း နုိုးရန်မေ့လျှက် လွန်အိပ်စက်တည်း။ တံခါးချိုးသံ ဗလောင်းဆံလည်း ခုိုက်ရန်ဖြစ်မြဲ ကိုယ့်အိမ်ထဲတည်း။ တံခါးဖျက...
တူတူဆုို တူတူပဲမုို့ တမူထဲ ထောက်ခံ။ မတူကွဲ ဖောက်မပြန်သည် နောက်တဖန် သိထား။ အစကောင်းလုို့ ခဏပြောင်းဆုိုလျှင် ဘ၀ဟောင်းကုို သွားဖုို့လွ...
မျိုးစစ်မှန်စွာ ပန်းမဟာတုို့ ကြမ္မာငင်ရောက် အုတ်ကြားပေါက်လည်း မကြောက်အလျဉ်း သူ ဖောက်ထွင်းသည် အလင်းပန်းများ ပ...
တုံးဖလား ရွာဦး ရွှင်ပျော်မြူး ညီပုံ ဤပုံ ချွေးတွေက စုံ။ မတုန်ပါကွဲ့ သည်အရေး မောင်တုို့မယ် ပညာထွန်းဖုို့ တွန်းလုိုက်စုို့လေး။ ...